(tonga teto avy amin'ny Pentekosta)
Ny Pentekôsta na Pentekôty dia fety kristiana ahatsiarovana sy ankalazana ny nidinanan’ny Fanahy Masina tamin’ireo Apostoly tamin’ny faha-50 andro taorian’ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty. Amin’ny Alahady fahafito aorian’ny Paska no anatanterahana azy. Io fety io no mamarana ny fetin’ny Paska.
2 Ny fety jiosy mifanandrify amin'ny Pentekosta
3 Datin’ny Pentekosta
4 Tantaran'ny Pentekosta
5 Hevitr'ilay fankalazana
Ny teny hoe Pentekosta na Pentekôty dia avy amin’ny teny grika hoe πεντηκοστὴ ἡμέρα / pentêkostề hêméra izay midika hoe “andro fahadimampolo”. Izany dia mampahatsiahy ny nilatsahan’ny Fanahy Masina tamin’ireo Apostoly sy ny hafa koa tamin’ny andro fahadimampolo taorian’ny andro nitsanganan’i Jesosy ho velona, araka ny voasoratra ao amin’ny Asan'ny Apostoly ao amin’ny Baiboly kristiana.
Ny fety jiosy mifanandrify amin'ny Pentekosta[hanova | hanova ny fango]
Ny fankalazana ny Pentekosta dia avy amin’ny fety jiosy atao hoe Shavuot (heb.: שבועות) izay midika hoe "Fetin’ny Lohavokatra" na "Fetin’ny Herinandro" izay tandreman’ny Jiosy araka ny voasoratra ao amin’ny Bokin'ny Eksodosy sy ao amin’ny Bokin’ny Nomery ao amin’ny Baiboly hebreo na ny Testamenta Taloha (Eks. 23.16-17; 34.26; Nom. 28.26).
Datin’ny Pentekosta[hanova | hanova ny fango]
Ny Pentekosta dia ankalazaina amin’ny Alahady fahafito (andro faha-49) aorian’ny Alahadin’ny Paska, ka miovaova sahala amin’ny datin’ny Paska ny daty anatanterahana azy. Tsy maintsy amin’ny Alahady anelanelan’ny 10 Mey sy 13 Jona ny datin’ny Pentekosta. Mitohy amin’ny Alatsinainin’ny Pentekosta izany amin’ny firenena sasany.
Tantaran'ny Pentekosta[hanova | hanova ny fango]
Fety jiosy[hanova | hanova ny fango]
Ao amin’ny tetiandro hebreo, ny Shavuot dia mizotra ao anatin’ny “fito herinandro feno” na dimampolo andro hatramin’ny ampitson’ny Shabbat (Sabata) (Eks. 33.16), aorian’ny fetin’ny Paska jiosy (Pesahk). Izany no anaovana azy amin’ny teny hebreo hoe שבועות / Shavuot izay adika hoe “Fetin’ny Herinandro (maro)” sy amin’ny teny grika hoe πεντηκοστos / Pentekostos izay adika hoe “Fahadimampolo” teo amin’ireo Jiosy manana kolontsaina grika. Araka ny voalaza ao amin’ny Levitikosy izany (Lev. 23.16).
Avy amin’ny fetin’ny fijinjana izay niova tsikelikely ho fankalazana ny Fanekem-pihavanana natao tao Sinay teo amin’Andriamanitra sy i Mosesy sady fanorenana ny Lalàn’i Mosesy izany. Izany fiovan’ny anton’ny fety izany dia ny faharavan’ny Tempolin’i Jerosalema tamin’ny taona 70 satria ao amin’ny Tempoly no tokony hanaterana ny fanatitra (ny vokatry ny fambolena).
Tamin’ny fiandohan’ny taonjato voalohany dia nanjary iray amin’ireo fetin’ny fivahiniana masina isan-taona ny Shavuot, indrindra ho an’ny Jiosy manana kolontsaina grika sy ho an’ny sekta jiosy sasany. Tamin’ny taonjato faha-2 vao nampiraisin’ireo mpanaraka ny fampianaran’ny Fariseo ny fetin’ny fijinjana sy ny fahatsiarovana ny Lalàna nomena tao Sinay.
Araka ny Evanjely[hanova | hanova ny fango]
Ny Asan’ny Apostoly dia mametraka mazava amin’io fety jiosy io ny tantaran’ny Apostoly voalohany izay nahazo ny Fanahy Masina sy ny tsindrimandrin’ Andriamanitra tao amin’ny efitrano ambony (ilay niarahan’i Jesosy nisakafo farany tamin’ireo mpianany) tao Jerosalema: nisy lela mitarehin’afo teo ambonin’ny Apostoly tsirairay, izay manambara ny fahatongavan’ny Fanahy Masina nahatonga azy ireo hiteny amin’ny fiteny maro hafa ankoatry ny fiteny galileana.
Ireo lela mitarehin’afo, araka ny lovantsofina jiosy ny amin’ilay fanambaran-tenan’Andriamanitra tao Sinay izay heverina fa mitovy amin’izany zava-nitranga izany, dia maneho ny Feon’Andriamanitra. Ny lovantsofina kristiana kosa dia mandika sady maneho ny Pentekosta ho fandraisana ny fanomezam-pahasoavan’ ny fahaizana fiteny maro izay ahafahana mitondra ny hafatry ny famonjena ny olona rehetra any amin’ny faran’ny tany araka ny ambaran’ny fiavian’ireo vavolombelon’ilay zava-nitranga, any am-Pielezana jiosy (Asa 2.5-11). Nanarakaraka ny Fiakaran’i Jesosy any an-danitra izay tantaraina ao amin’ireo Evanjelin’i Joany sy ny an’i Lioka sy ny an’i Marka ary ny Asan’ny Apostoly ny fidinan'ny Fanahy Masina.
Araka ny voasoratra ao amin’ny Asan’ny Apostoly, ireo izay nilatsahan’ny Fanahy Masina no hampiely ny Vaovao Mahafaly: ny lahatenin’ny apostoly Petera dia nahatonga Jiosy miisa 3 000 mpivavaka hatao batisa (Asa 2.41).
Ny Evanjelin’i Joany ihany no mitatitra fa nandritra ny sakafo farany niarahan’i Jesosy tamin’ny mpianany izay notanterahiny ny omalin’ny andro namonoana azy, i Jesosy dia nilaza mialoha tamin’ireo mpianany ny hiavian’ny Parakleto (avy amin’ny teny grika hoe: παράκλητος / Parakletos; latina: Paracletus izay midika hoe "Mpampionona" na "Mpananatra" na "Mpisolovava") (Joa. 14.15-31). Tsy miresaka ny amin’izany ireo Evanjely sinoptika (Matio sy Marka ary Lioka).
Ny fankalazana ny fetin’ny 50 andro dia efa notanterahin’ny Kristiana tamin’ny taonjato faha-2 nefa tsy tamin’ny fiangonana rehetra. Tamin’ny taonjato faha-4 vao natao fety raikitra ny Pentekosta ary tamin’ny fiafaran’izany fe-potoana dimampolo andro izany no nanaovana azy. Ny tao Rôma sy Milano tamin’ny taona 380 dia fantatra fa nankalaza izany.
Taty aoriana, tamin’ny taonjato faha-20 dia niseho ny Pentekotisma, izay firehana protestanta ara-pilazantsara manome lanja manokana ny fanomezam-pahasoavan’ny Fanahy Masina, sahala amin’izay niseho tamin’ireo Apostoly sy ny mpino hafa koa izay niangona tamin’ny andron’ny Pentekosta.
Hevitr'ilay fankalazana[hanova | hanova ny fango]
Ho an'ny Kristiana mino ny Trinite, ny fetin’ny Pentekosta dia fotoana manokana ankalazana ny Fanahy Masina, amin'ny maha persona fahatelon’ny Trinite azy. Amin’izany, ny vavaka atao dia angatahana amin’Andriamanitra ny hanomezany ny Fanahy Masina. Ahatsiarovana koa ny nanombohana nitory ny Vaovao Mahafaly sy ny fiorenan’ny Fiangonana kristiana voalohany ny Pentekosta.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentekôsta&oldid=993675"
Voaova farany tamin'ny 13 Jiona 2020 amin'ny 10:03 ity pejy ity.